अधिकांश चिकित्सकमा ‘ढिलो आउने रोग’ | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अधिकांश चिकित्सकमा ‘ढिलो आउने रोग’
२०७१ मंसिर १९, शुक्रबार ०३:०६ गते
भरतपुर । जिल्लाकै पुरानो सरकारी अस्पताल, भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकहरुमध्ये अधिकांशले पूरा समय अस्पतालमा काम गर्दैनन् । बिहान अस्पताल समयभन्दा ढिला गरी अस्पताल पुग्ने र फर्कंदा पनि अस्पताल समयसम्म पनि अस्पतालमा नभेटिने समस्या अस्पतालमा बढेको छ ।
‘चिकित्सकहरुलाई समयमा अस्पतालमा उपस्थित गराउन विद्युतीय हाजिरी मेसिन जोडियो तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन’, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. केशव भुर्तेलले भने, ‘केही चिकित्सकहरुमा ढिला गरी अस्पताल आउने र छिटो अस्पतालबाट बाहिरिने समस्या कायमै रह्यो ।’
पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा विभागले समेत चिकित्सकहरुको अस्पतालमा रहने समयलाई बढी निगरानीमा राख्न थालेको जनाउँदै मेसु भुर्तेलले आफूले समेत यसमा बढी कडाइ गरेको जनाए । तर बिहीबार चितवनपोष्टकर्मी अस्पतालमा पुग्दा नौ बजे अस्पताल आइपुग्नुपर्ने चिकित्सकहरु १० बजेसम्म पनि अस्पतालमा हाजिर गरिरहेको भेटिए ।
‘धेरैजसो चिकित्सकहरु साढे नौ बजेभित्रै अस्पताल छिर्छन्, केहीको समस्या अझै छ’, मेसु डा. भुर्तेलले भने, ‘नौ बजे अस्पतालको समय भने पनि कमै मात्रै चिकित्सकहरु यो समयमा अस्पतालमा आइपुग्छन् ।’ चिकित्सकहरु निजीमा बढी व्यस्त हुँदा पनि समस्या परेको बताइन्छ ।
‘चिकित्सकहरु समयमा अस्पताल नपुग्नुका पछाडि उनीहरु निजीमा व्यस्त हुनु हो’, भरतपुरका शरण तिवारीले भने । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकहरुको अस्पताल समय भनेको बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म हो । यो आकस्मिक र आइसीयूका चिकित्सकहरुका हकमा भने लागू हुँदैन । उनीहरु चौबीस घण्टामध्ये कुनै पनि आठ घण्टा अस्पतालमा रहन गर्छन् । तर अहिले अस्पताल समयभित्रै पनि अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिएपछि बिरामी चिकित्सक खोज्दै भौँतारिरहेका भेटिन्छन् ।
‘रिपोर्ट देखाउनु थियो चिकित्सक नै छैनन्’, दिउँसो १ बजे अस्पतालमा भेटिएका माडीका पवन सुवेदीले भने । अस्पतालका चिकित्सकहरु भने अस्पतालमा कुन चिकित्सक समयमा अस्पताल रहने नरहनेभन्दा पनि उनीहरुको अस्पतालप्रतिको लगानी कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘राम्रा र दक्ष चिकित्सकहरुले थोरै समयमात्रै अस्पताललाई दिए भने पनि अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिने छ’, अस्पताल मेडिकल विभाग प्रमुख डा. विजय पौडेलले भने, ‘तर दिनरात जुनसुकै बेला अस्पताल आउनुपर्ने चिकित्सकलाई समय सीमामा बाध्नु पनि उचित होइन ।’
पाँच सय शैया रहेको यो अस्पतालमा अहिले ७० जना चिकित्सकहरु कार्यरत छन् । सरकारी दरबन्दीका ४९ र अस्पताल विकास समितिका २१ चिकित्सक अहिले यो अस्पतालमा छन् । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका रेडियोलोजिष्ट डा. सन्जयकुमार शाह अस्पताल समयमै निजी क्षेत्रमा भेटिएपछि अहिले अन्य सरकारी अस्पतालहरुमा कार्यरत चिकित्सकहरुमा पनि सबैको चासो बढ्न थालेको छ ।